कलियुगका गणेश, १७ बर्सिय किसोरको तौल १३५ केजि ! - Sidha News
कलियुगका गणेश, १७ बर्सिय किसोरको तौल १३५ केजि !
मोरङको मिक्लाजुङ–४ ढाडेका गणेश तामाङलाई डेढ किलोमिटर टाढा रहेको विद्यालय पुग्न डेढ घण्टा लाग्छ । औसत मानिसहरू त्यति बाटो १० मिनेटमा छिचोल्छन । यही कारण उनलाई स्कुल नै पढ्न छोडौँ–छोडौँजस्तो लाग्छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर तामाङका अनुसार गणेश कक्षा– १ मा पढ्दा ताका नै ६० किलोका थिए। गणेशको खानपान र दैनिकी सामान्य छ । घरका सानातिना काममा उनी सघाउँछन । तर उनको शरीरले उनलाई चाहे अनुसार काम गर्न दिँदैन । गणेश भन्छन, विद्यालय जान र आउन गाह्रो लाग्छ । अजङढ्गको जिउ भएकाले उनको नाम नै गणेश जुराइदिएको उनका बाबु मानबहादुरले बताउनुभयो तर गणेश नामबाट उनी अहिले सन्तुष्ट छैनन । उनले भने धेरैले हात्ती भनेर जिस्क्याउँछन ।